Marketing amin'ny finday ao amin'ny indostrian'ny mpivarotra | Martech Zone
Marketing amin'ny finday amin'ny indostrian'ny mpivarotra
Talata, Oktobra 22, 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ny finday sy ny fivarotana antsinjarany dia manohy manolotra fotoana iray ho an'ny mpivarotra hanatsarana ny sandan'ny mpanjifa sy hampitombo ny tsy fivadihana - amin'ny farany mitondra ny varotra. Paikady tsotra toa Hafatra SMS manana tahan'ny valiny tena misy fiatraikany. Vahaolana mandroso kokoa toa fampiharana finday afaka manatsara ny traikefa fiantsenana ho an'ny mpanjifa.
Dynmark dia orinasam-pitsikilovana finday sy fandefasan-kafatra any cloud any UK. Natambatr'izy ireo ity sary ity izay manome antontan'isa matanjaka hanohanana ny ezaka fivarotana varotra ataonao amin'ny alàlan'ny fampiasana teknolojia finday.
Tags: marikafinday fampiharanafinday-barotrafampiharana antsinjarany findayantsinjaranyindostrian'ny asa fivarotanavarotra antsinjaranySMSfandefasana hafatra an-tsoratra
Cheatsheet Marketing amin'ny mailaka farany
Ny sehatra marketing-nao dia tsy marina araka ny noeritreretinao azy
23 Okt 2013 amin'ny 1:04 PM
Infographic mahafinaritra, misaotra tamin'ny fizarana azy Douglas. Tena hitako fa mahasoa ilay torohevitra farany nomen'izy ireo amin'ny farany hoe "ny varotra hendry dia…". Ny tsena finday dia manome safidy lehibe amin'ny ho avy ho an'ireo mahay mahay mampiasa.